Banyere Anyị - Shenzhen Kaz Circuit Co., Ltd.
Tọrọ ntọala na 2007, KaiZuo Electronic (nke a na-akpọ KAZ) bụ ọkachamara & onye na-eweta ọrụ eletrọnịkị (EMS) sitere na China.N'ihe dị ka ndị ọrụ 300 nwere ahụmahụ, KAZ nwere ike inye ndị ahịa otu nkwụsị ọrụ gụnyere PCB n'ichepụta, components Sourcing, PCB Assembly, Cable Assembly, Box Building, IC Programming, Functional and Aging Testing.Asambodo na ISO9001, UL, RoHS, TS16949.
Ejiri ya na 5 SMT dị elu, igwe na-ebipụta akpaka (DSP1008), MIRAE MX200 / MIRAE MX400 ahịrị mmepụta ngwa ngwa, YAMAHA akụrụngwa (YS24 / YG12F ...), reflow soldering (NS-1000), AOI test equipment (JTA) -320-M), akụrụngwa nyocha X-Ray (Nikon AX7200), ahịrị mmepụta DIP 2 na ịgbanye mmiri Nitto.
Mgbe ilekwasị anya na ọrụ ndị na-emepụta eletrọnịkị maka afọ 13+, KAZ eguzobela ogologo oge na-arụkọ ọrụ ọnụ na afọ ojuju ndị ahịa n'ụwa niile.Ọ kachasị site na North America, European, Asia na Australia.Mpaghara ngwa gụnyere njikwa ụlọ ọrụ, IT / Netwọk, IoT, nchekwa, ụgbọ ala, elektrọn eletriki, ngwa elektrọn ndị ahịa, ọkụ, wdg.
Site centralized ịtụ nke ihe ịzụrụ, centralized mkpokọta nke multiple ahịa na otu ihe onwunwe, na aggregation nke multiple ihe nke otu ọdịdị, n'otu iwu na-enịm maka anyị ogologo oge imekọ ihe ọnụ.Mgbe nyochachara nke ọma, anyị nwere ike nweta ozi ndị ọzọ n'aka ndị na-eweta ngwaahịa nwere mmesi obi ike.Ọnụ ahịa ka mma na nnyefe ka mma.
N'otu oge ahụ, anyị nwere obi ụtọ ịnyefe ndị ahịa anyị àgwà a ma nyere ha aka imeziwanye asọmpi ha na asọmpi ahịa ahịa taa, n'ihi na anyị ghọtara nke ọma na ndụ ndị ahịa bụ nlanarị anyị;mmepe ndị ahịa bụ mmepe anyị .Site na ụlọ ọrụ PCB na SMT nke anyị, ọnụ ahịa ụlọ ọrụ mbụ na oge, na-ewepụ njikọ etiti, ọnụ ala na arụmọrụ dị elu.N'otu oge ahụ, site na nkwado nke ndị ọkachamara R&D ọkachamara anyị, anyị nwere ike inye ndị ahịa nkwalite mmemme iji nyere ndị ahịa aka belata ọnụ ahịa ma ọ bụ belata oge nnyefe.
"Ịdị mma bụ usoro ndụ."Anyị emeriwo ntụkwasị obi nke ndị ahịa nwere àgwà na aha ọma na ụlọ ọrụ ahụ.
Njikwa ogo anyị na-ezo aka na ihe achọrọ nke sistemu njikwa ogo ISO.Site na nhazi nke usoro mmepụta nke ọ bụla, a na-emepụta mmepụta SOP iji kwado mmejuputa ndị ọrụ iji zere njehie ndị a na-ezere.
Site n'ịgbasi ike nyocha akwụkwọ ntuziaka siri ike na nyocha igwe na njikwa usoro, Anyị na-enye ndị ahịa ngwaahịa na-ezute ma ọ bụ karịa ihe ndị ahịa chọrọ.